Ọgụ A Na-alụso Ọrịa Nje Virus na-aga n'ihu Na-enweghị Mgbasa Ọsọ na Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraỌgụ A Na-alụ Of Of ọrịa Coronary na-aga n'ihu na Ankara
24 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Ọgụ megide ọrịa coronavirus na Ankara na-aga n’ihu na-eji nwayọghị
Obodo Ankara na-aga n'ihu na ọgụ ya megide ọrịa coronavirus. Onye isi obodo Metropolitan Mansur Yavaş kwuru na ha ga-akwado ụmụ amaala dị afọ 65 gbagowe, ndị kpọrọ oku maka "HomeKal", mgbe ha na-alọta.
Mgbe ọ na-agwa ụmụ amaala dị afọ iri isii na ise agafee na akaụntụ mgbasa ozi ha na-elekọta mmadụ, Mayor Yavaş kwupụtara na ha agbazite ndị ọrụ ụgbọ ala iji rụọ ọrụ na ahịa na ngalaba 65, na a ga-egbokwa mkpa ụmụ amaala gụnyere na oke a. ASKİ ga-eme usoro ịbanye mmiri maka ndị debanyere aha afọ 17 ma karịa, ndị nwere mita mmiri nwere kaadị, ruo ụbọchị Tuesday, Machị 65. Ndi otu ime obodo na aru oru 24/7 maka ahuike ọha, na-emebi kwa ubochi ebe oha na eze na ndi oha na eze, karie ugbo ala nke ugbo ala.
Obodo Ankara na-aga n’ihu n’agha megide ọrịa coronavirus n’adịghị akwụsịlata.
Na-abawanye mbọ ndị na-egbochi ọgwụ maka ahụike ọha, Metropolitan Obodo na-emejuputa usoro ọhụrụ maka mkpa ụmụ amaala. Onye isi obodo Ankara Mịnịsta Mansur Yavaş kwupụtara na nkwupụta ya na akụkọ mgbasa ozi ya na-elekọta mmadụ na-achọpụta na ahịa ahịa kwa ụbọchị nke ụmụ amaala dị afọ 65 na karịa, bụ ndị a machibidoro iwu mgbe ọ na-abịa ma na-akpọ maka "HomeKal", ga-ezute site na ndị na-ebugharị ọgba tum tum gbazite na Obodo Obodo.
Mayor Yavaş, onye kesara ndepụta nke ahịa na ngalaba 17 na Ankara na mbụ, ya na akụkọ mgbasa ozi ya na ebe nrụọrụ weebụ Metropolitan, gwara ụmụ amaala dị afọ iri isii na ise okwu ndị a:
“Ndị obodo m hụrụ n'anya, nke mbụ, nọnyeere gị. Enwere m olileanya na anyị ga-agabiga ụbọchị ọjọọ ndị a, site n'aka. Dị ka ọ si mara, ewepụtara oge ị ga-alọta mgbe ọ dị afọ 65 ma karịa. Mkparịta ụka anyị na agbụ ahịa na-aga n'ihu igbo mkpa nke ndị nọ na mkpa. N’oge na-adịghị anya, anyị ga-ebipụta ha niile na ọnọdụ, adreesị ozi, alaka na kọntaktị ha. Gha enwe ike inweta ihe ichoro. Anyị na ndị ụlọ ọrụ na-ezi ozi na anyị nwekwara mkparịta ụka. Dịka obodo, anyị ga-anwa inyere gị aka na mkpa gị. Omume obodo anyị gbasara mpaghara ọrụ ụlọ ka na-aga n'ihu. Na mgbakwunye, ọrụ nri anyị na-ekpo ọkụ na-aga n'ihu maka ezinụlọ 20 bi n'okpuru nsogbu agụụ. Enwere m olileanya na ị ga-alanarị ụbọchị ọjọọ ndị a na-enweghị mbibi ọ bụla. Anyị niile ga-aga aka. Ana m akwanye unu niile ùgwù. ”
Ngalaba na-ahụ maka ndị na - elekọta mmadụ nke Obodo Metropolitan ga - akwụ ụgwọ nke ndị obula ejikọtara na Federation of All moto na moto. Na-esonye na usoro ndị ọrụ na-elekọta mmadụ, Obodo ukwu ga-eweta ọrụ a na-akwụghị ụgwọ ụmụ amaala dị afọ 65 na karịa, ma gbochie ndị ọrụ na-enweghị ọrụ na-eweta ụgwọ kwa ụbọchị n'ụlọ ha.
Çağdaş Yavuz, Onye isi otu Federation of All Anatolian moto, ndị gbakọtara n'ihu ndị isi obodo ukwu wee kwuo na ha dị njikere maka ọrụ, kwuru:
“Mgbe izizi, anyị ga-eje ozi narị ndị ozi 100. Anyị ga-aga n'ihu na ndị ozi ọzọ dị ka ịrị elu a na-achọ. Anyi nwere oru dika ndi otu. Ruo mgbe oge nkwụsịtụ nke ụmụ amaala dị afọ 65 gbagowe ma nweekwa ọrịa na-adịghị ala ala ga-agabiga, anyị ga-ewere nri ha na mkpa ha ndị enyere n'iwu site n'ahịa dị n'etiti 12.00-17.00. Ka ọ dị ugbu a, emechiela ụlọ oriri na ọ unitsụ andụ na ụlọ niile, ndị na-ebugharị ebugharị anyị enweghị ọrụ. Onye isi obodo anyị eweghara ọnọdụ a na opekata mpe, ndị ozi anyị enwetala ohere iwere ego kwa ụbọchị n'ụlọ ha. Anyị na-ekele Onye isi ala anyị na ekele anyị. ”
Ndị otu Ankara City dọtakwara uche mkpa ọ dị maka imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị otu ndị Anatolian Motorcycling Couriers Federation, ndị ahịa ahịa ọgbakọ na ndị na-azụ ahịa, na-ekele nkwado ndị njem ọgba tum tum na ndị isi obodo ukwu na isi obodo City, ebe ọ kpọrọ maka "HomeKal".
AKWKWỌ MAKA AK CKỌ AHAPR.
Followinggbaso mmachibido iwu banyere mkpokọta akwụkwọ na Isi Obodo maka ọgụ na ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, a malitere inye nkwado nri na mpaghara ebe ndị a na-ebi na iwu nke Onye isi ala Yavaş.
Mustafa Koç, Onye isi Ngalaba Ndị uweojii Ọchịchị, kwuru na ha rụrụ ọrụ mkpochasị ọbara na mpaghara ebe ndị na-anakọta akwụkwọ, bi na Şirindere mpaghara Çiğdem District, nyere ozi ndị a:
“Nke a bụ ebe ihe dị ka narị akwụkwọ mkpokọta isii bi. Ndi anakọtara akwụkwọ a mejuputara onu ogugu mmadu nke kachasi nma ma buru nnukwu nsogbu na mgbasa na oria a. Maka nke a, anyị amachibidola ịnakọta akwụkwọ. Anyị enyela ndị nchịkọta akwụkwọ nri dị ka obodo. Anyị ekepụtala usoro iji na-ezukọta nri ha na ndị ezinụlọ ha n'ụtụtụ na mgbede ụbọchị niile. Anyị ga-ekesara ndị ezinụlọ ha nri otu puku na narị abụọ na narị abụọ bi na mpaghara ise dị iche iche. Anyị na-ekpochapụ mpaghara ha nọ na ya na mpempe akwụkwọ anakọtara kwa ụbọchị. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, ogologo oge ebe nje a na-ebi ndụ dị n'akwụkwọ. Ruo mgbe anyị ga-enwe ngwọta na-adịgide adịgide, anyị ga-egbochi imeri mkpagbu ma kpochapụ mgbasa nke ihe ize ndụ. ”
Abdülkadir Aşık, onye ritere uru site na nri enyemaka a kwadebere ma kesaa na BELPA Cuisine, kwuru, "Anyị agaghị anakọta akwụkwọ ọzọ n'ihi nje a. Akpagbuo ayi dika ezin’ulo, ma ndi obodo anyi chere banyere anyi ma ghara inye anyi agu na agu. Ana m ekelekwa obodo ukwu nke ukwu. ”Ceylan Avcı ọzọ na-anakọta akwụkwọ kwuru," Anyị anaghị anakọta scrap na akwụkwọ ọzọ. Ọchịchị obodo na-ewetara anyị nri ma na-eme mmiri mgbe niile na mpaghara a ”, kelere Obodo Obodo.
Seyfettin Aslan, onye isi Ngalaba nke Ahụike, kwuru na ha amalitela ọgwụ nje na mpaghara 10 ebe ụmụ anụmanụ na-azụ n'okporo ụzọ nke ndị ọrụ afọ ofufo na-ahụ maka anụ ụlọ riri nri n'obodo ahụ.
Mfe ANA 65B XNUMXR XNUMX XNUMX NA OB SUBR SUB SUBB SUBR FROM FROMBARA ASKI
Obodo ukwu nke gosipụtara usoro ọhụrụ megide ihe iyi egwu nke ọrịa a, ga-amalite itinye mmiri na mita kaadị ndị debanyere aha ha dị afọ iri isii na ise gafere ruo ụbọchị Tuesday, Machị 65.
Dịka akụkụ nke ọrụ ndị debanyere aha afọ 65 na ndị okenye na-enweghị ike ịpụ nwere ike iji site na ịbịaru Başkent 153 ma ọ bụ (0312) 616 10 00, ndị otu ASKİ ga-arụ ọrụ ntinye mmiri nke ndị debanyere aha site na iji mita mmiri kaadị ahụ na adres ha.
ASKI, nke na-agwa ndị debanyere aha ya kwa ụbọchị site na ozi ederede (sms) na ọkwa ma na-arụ ọrụ na awa 24, ekpebiela ibido usoro mmechi nke ndị debanyere aha ya n'ihi ọrịa na-efe efe ruo ọnwa 2. ASKİ General Directorate, nke na-aga n'ihu imeghe mmiri maka puku ndị debanyere aha ụlọ obibi 22 ndị mechiri mmiri ha na mbụ n'ihi ụgwọ a na-akwụghị ụgwọ, agbanweela na usoro nhọpụta maka arụmọrụ ahụ n'etiti March 23. debanyere aha www.aski.gov.t bụ Nounkpọsa na ị nwere ike ime ọkwa na ASKI; ọ ga-arụkwa ntinye aka ọhụụ, mgbanwe ndenye aha, ntinye ụlọ na azụmahịa ịchụpụ onye debanyere aha, kagbuo ndenye aha, akwụkwọ ọnụahịa, mgbanwe counter (ngwa ọdịda ọdịda), nyocha akwụkwọ ọnụahịa na azụmahịa ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị.
EMEKA ANY TR NA-EBUTA UMARA KWES MASRS EBỌCH.
Ngalaba na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na ngalaba na - ahụ maka njikwa gburugburu ebe obibi na - arụ ọrụ na - ekpochapụ oke na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ obodo niile na - emebi ụgbọ njem ọha na eze kwa ụbọchị.
Ezie na ndị otu nke City Aesthetics Ngalaba na-eji ngwaahịa pụrụ iche eme ihe na-ehicha ihe na n'okporo ụzọ na okporo ụzọ, ọkachasị na arịa ụlọ na nkwụsị, ANKARAY, ụgbọ ala Metro na EGO, taxis na obere ụlọ na-edo onwe ya site na ntuzi aka Onye Isi Yavaş.
N'ikwu na ha nwere afọ ojuju n'ọrụ mmerụ ahụ nke na-eme n'ebe nkwụsị ndị ahụ, Fatih denzden, otu onye azụmaahịa ndị obere ya, kwuru, "nje a butere anyị niile nnukwu nsogbu na mba ahụ. Onye isi obodo anyi bu Mr. Mansur Yavaş na - eme ka ugbo ala anyi ghara idi nbi kwa ubochi. Vehiclesgbọala anyị dị ọcha. Ana m ekele ya n'aha ndị na-ere ahịa anyị. "Ender Yılmaz kwuru," Anyị ga-ekele ekele Onye Isi Obodo anyị Mansur Yavas maka usoro ịgba. Ọ sịrị, "A na - aghafere ala anyị kwa ụbọchị." Murat Karakoca kwuru na n'ihi ọrụ nke Obodo ukwu a, uche ntụkwasị obi ọha na eze mụbara, “Ndị anyị nwere ike ịnya ụgbọ ala n'enweghị nsogbu. Anyị na-ekele obodo anyị na Mayor anyị Mansur Yavas maka mbọ ha. ”
Continuga n’ihu na-emebi ihe na ndị tagzi ahụ na Kızılay Güvenpark Taxi Nchekwa Ebe, BELPLAS A.Ş. Ndị na-ahụ maka taịsị na-ekele ndị otu nhicha ahụ gosipụtara afọ ojuju ha na ọrụ a dịka ndị a:
Dursun Göloğlu: “Dị ka onye na-anya tagzi, anyị ga-achọ ikele Onye Isi Obodo Ankara Nnukwu Mansur Yavaş. Needgbọala anyị kwesịrị ibute oria kwa ụbọchị ma fesaa kwa ụbọchị. ”
Ensari Güzelyurt: “Enwere m olileanya na anyị ga-agafe ụbọchị ndị a. Obi dị anyị ụtọ na ọrụ a. Anyị chọrọ ka eme ya kwa ụbọchị maka ma onwe anyị ma ndị ahịa anyị. ”
Levent Altınok: "Iji nye ndị bi na Ankara ọrụ ka mma, anyị na-agbaso ma na-akwado mkpebi a nke ndị obodo anyị na Ankara Metropolitan. Anyị na-agba mbọ ime ike anyị niile dịka onye taksi iji jeere ndị Ankara n'okpuru ọnọdụ ka mma. Ọ ga-amasị m ikele ndị obodo Ankara Nnọchianya maka inye ọrụ a. ”
Obodo ukwu, nke na-ebugharị ihe mkpochasị ọrụ site na ogige egwuregwu ruo ụlọ nke ndị na-abụghị nke gọọmentị, ụlọ ikpe, ngalaba ndị agha, ụlọ ndị uwe ojii, ụlọ ọrụ ime obodo, ụlọ ọgwụ na isi ụlọ ọrụ, na-arụ ọrụ ọgbaghara na ngwaọrụ atomizer na Altındağ Neta agbata na slum ebe ụmụ amaala Syria na-ebi.
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nchịkwa na-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'emeghị ala
Ịsụgharị maşukiyen n'ime ebe a na-ebu nkume na-aga n'ihu
Ọganihu dị elu na-azụ Ụlọ na Bursa Na-aga n'ihu
Ọrụ ụgbọ oloko mba na-aga n'ihu n'ihu
Ihe oru 100 ijeri dollar mega na-aga n'ihu n'ihu
Ụzọ ụgbọ okporo ígwè BTK nọgidere na-akwụsịlata n'agbanyeghị ọrụ oyi
Egwu na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ a na-aga n'okporo ụzọ na-aga n'ihu
Na snow, agha megide snow na-aga n'ihu na-ekpuchi (Photo Gallery)
Ịgba Na-aga n'ihu na Bursa
Lelee Profaịlụ zuru ezu nke Mansur
Mgbanwe na YHT, Mpaghara, Marmaray na Başkentray Usoro Ọzụzụ na Oge